Lalàna… tsy manankery fa tsy ampiharina | NewsMada
Lalàna… tsy manankery fa tsy ampiharina
Hatramin’izao, tsy mbola vita tanteraka aloha ny ady amin’ny valanaretina Covid-19. Ahina hihamafy sy hihasarotra izany, raha tsy asiana fitandremana sy fiambenana. Fahavalo tsy hita maso tsinona, miovaova endrika, tsy mifidy olona… Amin’izany, misy ihany ny tsy mahalala na tsy miraharaha. Tsy hita be ihany, ohatra, izay fanajana sy fepetra ara-pahasalamana eny rehetra eny: fanaovana arovava orona, fanasan-tanana matetika, fanajana ny elanelana iray metatra…
Eny, na ny fampiharan-dalàna amin’ny hoe fanasaziana izay tsy manao arovava orona aza, ohatra: tsy hita be ihany koa, raha ny eto Antananarivo. Efa nisy ny fampitandreman’ny eo anivon’ny préfet de Police ny amin’izany. Mby aiza? Na misy ihany any ho any fa tsy hita sy tsy fantatra… Tsara ampahafantarina sy aseho ho hitan’ny rehetra isan’andro mba hitandremana, fa tena atao tokoa ny fanaraha-maso sy ny fanasaziana fa miverina tokoa izao ny aretina.
Ny fisintonana lakolosy nefa tsy mahataitra no anisan’ny tsy mahato teny amin’ny fampanjakana sy fanatanterahana didy aman-dalàna? Na manaitra ihany fa tsy mampihetsika… Ny tsy fihetsehan’izay tokony hihetsika miaraka amin’ny vava miteny no tsy mampihetsika izay hetsehina? Na fampahatsiahivana, na fampitandremana, na fanasaziana… Na mety misy ihany ny fampiharana didy aman-dalàna amin’itsy sy iroa, fa am-boalohany ihany.
Avy eo jerem-potsiny na zary fihomehezana sy fanesoana aza ny afo-mololo toy izany: miroborobo am-boalohany; avy eo, tsy hita hoe ahoana. Dia sasatry ny mampitandrina lava eny fa tsy henoina sy inoana teny. Tsy mahagaga raha mahazo vahana ny gaboraraka. Mby aiza, ohatra, ny amin’ny fanajana ny fenitra amin’ny fampiasana “sachet” hoe ho fiarovana tontolo iainana? Misy karazany faran’izay maivana sy manify no ho ny teo aloha aza. Toy izany koa, ohatra, ny amin’ny tsy fahazoana manao sora-damba toy ny akanjo-miaramila, ny fahazoana manao fitaratra mainty na maizina amin’ny fiara, ny fahazoana mitondra sy mitaingina moto raha tsy misy aroloha… Misy hatrany ny mihevi-tena ho ambonin’ny lalàna?